Kuwani waa isbeddellada maqalka ee Adobe ee 2021 | Abuurista khadka tooska ah
Adobe wuxuu soo bandhigayaa isbeddellada ugu horreeya ee maqalka ee 2021
Sannadkii hore, gaar ahaan xagaaga, Adobe wuxuu ku dhawaaqay Adobe Stock Audio y maanta ayaa la soo bandhigay isbeddellada maqalka ee 2021 markii ugu horreysay. Sannad 2020 ah oo dhiirrigeliyay abuuritaanka nuxurka dhammaan heerarka oo ay shirkadda Mareykanku ugu adeegtay ururinta daweynta muusikada iyo raadadka maqalka oo ka madaxbannaan xuquuqda daabacaadda.
Waxaan horeyba kaaga soo dirnay warkaas weyn Adobe siiyaan tayada maqalka oo tayo leh si loogu daro raadadka codka ama dhawaaqyo dhawaaqyo ah oo laga duubay fiidiyowyada laga sameeyay qaybtaada Cloud Cloud; sidii maalmo kahor Waxaan ka baranay gacanta Adobe lafteeda isbeddelada muuqaalka ee 2021.
Waa laba awood leh wakaaladaha u heellan maqalka, Epidemic Sound iyo Jamendo, taas oo wadata taas oo leh Adobe Stock Audio waxaan haysannaa waxyaabo tayo leh oo Adobe ayaa hadda sii deynaysa isbeddellada maqalka ee 2021.
Iyaga ayaa ku soo daray saddex isbeddel:
Heesaha Caalamka, taasina waxay mataleysaa dhammaan muusikadaas la xiriira caddaaladda bulshada, sinnaanta iyo matalaad dhab ah. Isbeddel si dhow loola xiriirinayo tuulada adduunka oo maanta ah muusig leh qaabab isku dhafan, noocyo iyo farshaxanno ka kala yimid adduunka oo idil.
Spectrum elektaroonig ah: dhig lahjadda on digital iyo elektiroonig ah taas oo u taagan sidii guuleyste si kor loogu qaado dhammaan noocyada noocyada muusikada; sida aysan u dayacin analogga.
Muusikada muusikada: Noocyada noocan ah ayaa marba marka ka dambeysa sii badanaya, Adobe ayaa dooneysa inay wax aragto leh mowjaddan muusigga ah ama dhawaaq dhammaystiran taariikhdaas aad ku raadinayso Podcast. Dhammaan laxanka ama muusikada nasashada si loo dejiyo mowduuc kasta oo laga hadlayo.
Waad aadi kartaa Adobe StockAudio waayo, ku raaxayso 10 wado oo bilaash ah oo markaa qiimee haddii ay mudan tahay in lagu raaxeysto adeeggan weyn ee shirkaddu si buuxda ugu heellan tahay aaladaha si ay u soo saaraan waxyaabaha ugu fiican dhammaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Adobe wuxuu soo bandhigayaa isbeddellada ugu horreeya ee maqalka ee 2021
Sida loo sameeyo astaan-biyood Photoshop ah